रूसी फुटबल लामो आफ्नो स्तर संग खुसी गरिएको छैन। Footballers क्षेत्र मार्फत पैदल waddling र प्रेरणा को deprived। चालु, लक्ष्य स्कोर र खेल जित्न - कि रूसी खेलाडीहरूलाई लागि रोचक छैन। ज्याला किन फेरि overstrained त्यसपछि, जीवन बाँकी लागि केही गर्न अनुमति पछि। ठूलो पैसा - एक महामारीले र रूसी फुटबल को एक स्वप्नलोक। तथापि, अहिले यसको बारेमा यसले।
Multimillion-डलर अनुबंध तपाईं ड्राइव खेल कार र उत्कृष्ट र विशेष आभूषण र सामान खरिद, महंगा विला रूसी खेलाडी बस्ने अनुमति दिन्छ। र जहाँ पैसा र विलासिता को धेरै छ, त्यहाँ मोडेल उपस्थिति दुवै जवान बालिका हुनेछ। आज तपाईं रूसी खेलाडी को पत्नी बाँच्न कसरी सिक्न हुनेछ। यो संग समानान्तर मा, तपाईं के तिनीहरूले जीवनमा के र कुन आफ्नो मनपर्ने सोख हेर्न। सबै छलफल, को पाठ्यक्रम, यो काम गर्ने छैनन्, तर सबै भन्दा प्रसिद्ध द्वारा पारित गर्न असम्भव छ। सँगै, हामी एउटा सानो शीर्ष सबैभन्दा सुन्दर र सेक्सी महिला रूसी खेलाडी (तस्वीर तल देखाइएको) गठन हुनेछ।
Daria Glushakova पत्नी मिडफिल्डर डेनिस Glushakov
त्यो मात्र 17 वर्षको हुँदा डेनिस संग Daria भेटे। जवान स्कूल परीक्षा मा एक वर्ष पछि, उनको साथीहरूसँग पार्क मा उनको पैदल देखे। एक केटी जस्तै तपाईं हेरेपछि, डेनिस आफूलाई सँगै झिकेर र तपाईंलाई भेट्न गए। फलस्वरूप, प्रकाश को इतिहास एक वास्तविक प्रेम र पारिवारिक सम्बन्ध मा गरिएका प्रेमलीला। सबैभन्दा हाल, जोडी दोस्रो केटी जन्म भएको थियो। द्वारा शिक्षा Daria दन्त चिकित्सक तथापि, यो काम थियो - अप बच्चाहरु ल्याउन। उनको इन्स्टाग्राम देखि एक जवान आमा खेल र सक्रिय जीवन शैली प्रेम भनेर बुझ्न सक्छौं।
Daria Valitova प्रेमिका स्ट्राइकर Aleksandra Kokorina
केटी यद्यपि, र एक फुटबल खेलाडी पत्नी, तर यो "शीर्ष" मा समावेश गरिएको थिएन असम्भव थियो। Daria Valitova - चरण नाम "एमिली" अन्तर्गत एक स्थानीय प्रसिद्ध गायक। 2014 देखि उनले प्रसिद्ध रूसी खेलाडी Aleksandrom Kokorinym भेटे। गायक यसको सौन्दर्य र फारममा हडताली। Daria Valitova , यात्रा गर्न खेल खेल्न, आफ्नो पहेंलो मा गाउन र रोल रुचि "लेम्बोर्गिनी।"
Ekaterina Gerun, गोल रक्षक इगोर Akinfeev को पत्नी
नियम रूसी खेलाडी, यस छाया मा लामो समय को लागि, क्यामेरा र मिडिया देखि लुकाउने को पत्नी। धेरै वर्ष को लागि, रूसी प्रेस हृदय इगोर Akinfeev को पहेली समाधान गर्न सकेन। यसलाई गरिएका रूपमा, उहाँले एउटा अविश्वसनीय सुन्दर र सेक्सी पत्नी थिए। Ekaterina Gerun एक अभिनेत्री र मोडेल छ। सेप्टेम्बर42015, रूस र स्वीडेन बीच मिलान को पूर्वसन्ध्या, जोडी एक छोरी, Evangeline थियो।
एलन Mamaev, मिडफिल्डर Pavla Mamaeva को पत्नी
दुई छोराछोरीको यो सुन्दर र मायालु आमा, विगतमा, एलन को मोडेलिंग व्यापार मा काम गरे। अब Housewives को स्थिति धारण। पत्नी Pavla Mamaeva धेरै असामान्य शौक छ - यो घोडचढी छ।
नतालिया Ignashevich पत्नी रक्षक सर्गेई Ignashevich
भविष्यमा पत्नी नतालिया 27 वर्ष मा भेटे। बाल्यकाल देखि, कलात्मक व्यायाम मा संलग्न केटी - संसार-वर्ग मास्टर छ। नतालिया एक अग्रणी प्रसारण रूपमा काम "गैर-फुटबल इतिहास।" उहाँले एक पटक सर्गेई Ignashevich कार्यक्रम संलग्न गरिएको छ। तरिका, चमत्कारपूर्ण ढङ्गमा, दुई आँखा भेट्छन् स्पष्ट प्रेम गरे। त्यतिबेला सर्गेई पहिले नै विवाह र दुई छोराछोरी छन् थियो। बस महिना को एक जोडी को छोडपत्र मा Ignashevich निर्णय र नतालिया संग डेटिङ सुरु गर्नुहोस्। केही समय पछि, संकेत को एक जोडी र दुई पाउँछ। Sergey नयाँ पत्नी धन्यवाद थिएटर र पुस्तकहरू रुचि भयो।
रूसी खेलाडी को पत्नी कस्तो छ?
बारेमा मानिसहरूलाई कसरी रोचक बाँच्न, अक्सर, यो सजिलो र सरल छ सिक्न। आजकल अधिकांश मानिसहरू जहाँ हरेक दिन फोटो र छोटो भिडियो अपलोड सामाजिक सञ्जाल, एउटा सक्रिय जीवन छ। यो हामीलाई पत्नीहरू र रूसी खेलाडी को प्रेमिकाहरुलाई हेर्न अनुमति दिन्छ।
महंगा गाडी, ठूलो यटों, सेतो बालुवा र नीलो समुद्र। एक साक्षात्कार मा उहाँले आफ्नो क्यारियर रूसी गोल रक्षक Vyacheslav Malafeev अन्त भन्नुभयो: "। फुटबल पछि जीवन छ" र तपाईं "Instagramm" आफ्नो पत्नी क्याथरीन जाने भने, सबै माथि ठूलो हदसम्म पुष्टि हुन्छ।
रूसी खेलाडी को पत्नी सुरम्य ठाउँमा आराम र विदेशी सोख, छोराछोरी हुर्काउन एक किसिम आशक्त र साना व्यापार मा संलग्न। तपाईं एक जवान र सुन्दर केटी थप के सोध्न सक्छ?
Jailbreak कसरी स्थापना गर्न र किन यो सबै के?